Ny Affinity dia mamela ny programa famolavolana azy maimaim-poana mandritra ny 90 andro | Famoronana an-tserasera
Ny Affinity dia manolotra fitsapana 90 andro amin'ny fandaharana mahafinaritra azy ary fihenam-bidy 50% amin'ny vidiny
Affinity dia orinasa iray izay efa noresahintsika imbetsaka noho ny kalitao avo lenta entiny amin'ireo programa fandrafetana azy. Toy ny tamin'ny taon-dasa tamin'ny areti-mandringana tanterakamiverena any manolora andrana 90 andro amin'ny programa toa ny Photo, Designer, ary Publisher.
Fampiharana telo miavaka izay safidy tsara indrindra amin'ny programa Adobe toy ny Photoshop, Illustrator ary InDesign. Niresaka momba ny toetra tsara sy Tombony ho an'ny Publisher Affinity na toy ny Photo dia fampiharana tsara hanahaka ny Photoshop traikefa amin'ny fandoavam-bola tokana.
Ny firaisana dia naka fotoana fohy hananganana fotoana niainana ankehitriny Ary toy ny tamin'ny taon-dasa teo afovoan'ny areti-mifindra, dia nametraka fisedrana 90 andro maimaimpoana ho an'ny fandaharan'izy ireo rehetra izy ireo. Nambaran'izy ireo fa, raha mbola manohy ireo zavatra ireo ihany izahay, naverin'izy ireo ireo 90 andro ireo mba hizahanao toetra tanteraka ny fangatahany.
Y es fa ny fitsarana dia ny kinova Mac sy Windows. na dia raha nanandrana ny fandaharan'izy ireo tamin'ny taon-dasa tamin'ireny fitsapana ireny ianao 90 andro, azonao ampiasaina indray ny kaonty mitovy hampiasana 90 andro indray.
Raha ny marina, raha efa te-hanao amin'ireo programa ianao, Izy ireo dia atolotra amin'ny fihenam-bidy 50%. Affinity Designer, ny safidinao amin'ny Illustrator, dia misy amin'ny 50% amin'ny $ 27,99; Affinity Photo, ny safidinao amin'ny Adobe Photoshop, azonao atao amin'ny 27,99 euro izany raha matetika 54,99; ary Publisher, miaraka amin'ny tolotra mitovy amin'izany ihany koa mba hankafizanao ny safidy hafa amin'ny InDesign avy amin'ny Adobe lehibe.
Tokony hampahatsiahy anao izahay fa izany no izy misy rindrambaiko ihany koa amin'ny iPad, noho izany aza adino ny fahafahanao mahazo programa famolavolana matotra toa an'ireo telo voalaza ireo sy izay manohy havaozina tsindraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny Affinity dia manolotra fitsapana 90 andro amin'ny fandaharana mahafinaritra azy ary fihenam-bidy 50% amin'ny vidiny
Ahoana ny fanovana rakitra PDF ho Word